Hambalyo Taageerada Guusha May 9-aad ee loogu talagalay Hawl-goyska Aayadda, qiyaasta, sms. Hambalyo gaaban oo qurux badan
Kuwa kale Fasaxyada May 9
Hambalyo wanaagsan oo ku saabsan Guul May 9 ee aayadda iyo qiyaasta
Maajo 9 waa mid ka mid ah fasaxyada ugu taabashada badan iyo xiisaha ee taariikhdeena: guushii ay ku dhufatay gumeysiga guusha geesinimada qaranka wuxuu ahaa dhacdo midoobaya jiilalka iyo gobollada. Maalintaan, waxaan ku foorarsannaa ka hor inta aysan xasuusta xasilooni ee malaayiin askari ah, waxaan ula dhaqannaa erayada jacayl daacad ah iyo mahadnaqno dadkeena. Nasiib darro, marxaladda aan la isku hallayn karin waxay keeneysaa xaqiiqda ah in sannad kasta ay yara yaraato oo yartahay kuwa aan wax ka qaban karno si aan ugu hambalyeyno guulaha May 9-keeda, waxaana masuuliyadi dheeraad ah ka codsanayaa hadal hambalyo. Maalintan, erayada rasmiga ahi waa wax aan la aqbali karin, waa waajib inaga midkeennu dooran karno ereyada ugu quruxda badan oo macquul ah awoowe iyo awoowe. Waxaan idiin soo bandhignaa dhowr tusaale oo ku saabsan hambalyada aayadda iyo qiyaasta - qurux, daacad iyo gaaban (sms).
Horumarinta ugu wanaagsan ee la gaarsiiyay askarta milatari ee 9-kii May ayaa si hufan ugu hambalyeeyay muddadii May 9-keedii. Sidee loo sameeyaa? Hambalyo qurux badan on Victory May 9 ee aayadda Aamiin quruxda badan May 9: sawirro iyo sawiro
Hambalyo gaaban May 9
Hambalyo wanaagsan oo ku saabsan guusha 9-kii Maajo ee askarta
Maajo 9-keedii, askarta ugu horeysa ayaa u hambalyaynaya qaraabada iyo asxaabta. Hambalyo wanaagsan marwalba waa shakhsi, adoo tixgelinaya shakhsiyaadka iyo qofka u hambalyeynaya (caruurnimada qaangaarka ah iyo kuwa awoowayaashu u jiheysanayaan halyeeyga oo leh carqalado kala duwan carruurta). Waxay ku haboontahay in la xuso duruufaha gaarka ah ee dagaalka iyo nolosha nolosha: ka dib oo dhan, waxaan u dabaaldegaynaa maalintaan ma aha oo kaliya dagaalyahannada, laakiin sidoo kale shaqaalaha ka danbeeya. Hambalyo Maalinta Guul, oo lagu soo dhaweeyay asxaabta, asxaabta, jaarka, ayaa derisyo badan ku jira, laakiin sidoo kale waxay ka buuxaan dareen, oo ah kuwa ugu muhiimsan ee ixtiraamka iyo mahadnaqa. Si kastaba ha noqotee, waa in laga fogaadaa muuqaalka iyo jidadka. Suugaanta iyo kalsooni daacad ah iyo qadarin, ka sii fiican.
Awowgeyga ayaa iska leh, weli waxaad tahay askari. Ha timaado in la qariyo barafka, U ogolow talaabadaada milatariga inay hoos u dhacdo, Laakiin waan ogahay in aanu wali kula jirno Dhamaan dadka dhintay waxaan cabi doonaa saaxiibada. Ilaahay ha naga siiyo dhamaan maalmaha nabadda ee farxadda leh!
Hambalyo ku sabsan awoowgayga Maalinta Guusha. Xitaa waa fiicantahay, inaysan ku jirin. Weli markaas, sida aan hadda ahay, Hooyo. In kastoo uusan arag cadowga - wuu neceb yahay! Wuxuu u shaqeeyay sida weyn. Waayo, roodhida kibista, waxaan u keenay Maalinta Dhibanaha, xitaa anigu ma ahayn dagaal. Wuxuu u adkaystay dhammaan khatarta, isagoo bixiyay caruurnimadiisa, Si aad u noolaato oo u koraan aduunkiisa Aabihiisna waa cajiib. Sidaa darteed in badan iyo jacayl Ku raaxaysta nolosha, Sidaas daraaddeed anigu ma arko dagaalka, My awoowe ayaa badbaadiyey dalkayga.
Aniga awowgayga ah! Waxaad ka badbaaday dhamaan nasiib-darrada, Inkastoo dhaawacyada - ay gubteen dabka ... Waxaad ku hambalyaynaysaa Maalinta Guul Guul aan ku faraxsanahay, maalinta ugu ifka! Adigu ma deynin caafimaadka, nolosha, Dnieper, Wisla oo soo qabatay, Desna, Si aad u hesho hooyadeyda hooyo ee dhammaan guga qarniyadii! Kaliya waxaan kaa codsaneynaa: Ka taxaddar carruurtaada! Waxaa jira ilo badan oo kale! Oo, haddaba sidaas u soco!
Waxaad ka badbaaday dagaal aad u xun, waxaan ku guuleystey inaan noqdo qof cajiib ah. Inaad u ogolaato qofna inuu hoos ugu tago, In kastoo xijigaagu uu ku daboolan yahay baraf, Dhammaan awoowe ayaa diyaar u ah inay caawiso, Waxaad ii hambalyaynaysaa Maajo 9, Qalbigana waxaan doonayaa inaan ku guuleysto, waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo nasiib!
Maalinta Weyn ee Guul, Walaalayaal! Fasax farxay, qaali! Wuxuu soo celiyaa xasuusta annaga, sannadaha hore. Aynu dagaalanno, ha lumin kuwa ku jecel, ha cabsanin cabsida xeryaha Nazi. Laakiin tan iyo markii aannu dhalannay, ka hor inta aan cibaadada la caabudin, Yaa badbaadiyey dalkayaga! Adiga ixtiraamkayaga!
Saaxiibayaal qaali ah! Sida aan ku faraxsanahay inaad na haysato, waligana waan kugu hambalyeyn karnaa Maalinta Weyn ee Weyn. Fikraddaadu waa mid qiimo leh, maxaa yeelay waxaad adigu naga siisay fursad gaar ah oo aad ku noolaato, dhisato mustaqbalka, samayso doorasho. Isaga oo naga saaro culaysyada fashilmay ee aan loo dulqaadan karin, aad naftaada u diidday in aynaan mar walba kuu celin karin. Ogolow jacayl aan naxariis lahayn iyo xushmad la'aan.
Hambalyo: Kaararka boostada laga bilaabo May 9
Sidee qurux badan u xirxirta diinta St. George? Fursadaha ugu fiican halkan
Hambalyo qadiyad ah oo ku saabsan qadarinta May 9. Sidee loo sameeyaa?
Hambalyo dhammaan dadka maalgashaday xitaa qaybta ugu yar ee sababaha Dhibaatada, maxaa yeelay waxay ka timaadaa qaybahaas oo ah in daryeelka iyo awoodda badan ee gobolkeenu uu horumariyay. Waxaan jeclaan lahaa inaad si joogto ah u dareento dareenka diimeed ee malaayiin qof oo xusuusta oo muddo dheer xasuusnaaya fankaaga.
Waxaan kugu hambalyeynayaa farxadda iyo murugada Maalinta Guul! Maalinta Guul waa "maalinta cas ee jadwalka", taas oo aad uga duwan fasaxyada kale. Maalintani waxay calaamad u tahay awoodeena iyo dayacdaynta, guusheena iyo dhimashadayada, sharafkeena iyo xanuunkeena.
Maanta waa fasax aad u weyn, oo aan rabo in aan kuu sheego ereyo badan, laakiin qalbigeyga waxaan ku dhihi doonaa hal wax kaliya - "Waad ku mahadsan tahay!" Waad ku mahadsantahay xaqiiqda ah in hadda aan ku noolnahay nabad, iyo dhamaanba mahadnaqaaga iyo geesinimadaada. Caafimaad adiga, jacayl iyo nolol dheer!
Hooyadayda qaaliga ah. Wargalintaada iyo amarradaadu waa geesinimadaada iyo geesinimadaada. Ha ka xumaanin naftaada, waxaad halis gelineysaa noloshaada, markaa kadib waxaanu dhashey waligeenna oon ogeyn waxa aad baratay intii aad weli iskuul dhigatey. Waad ku mahadsan tahay ilaalinta waddankeena iyo magaaladeena oo naga siiya nolosha.
Hambalyo qurux badan oo ku saabsan guusha May 9 ee aayadda
Hambalyo 9ka bisha Dambe
Hambalyo qiiro leh waxa ay kala soocaan lyricism gaar ah: xitaa kuwa ay ku qoran yihiin gacmo nadiif ah oo caan ah, waxay taabtaan nafta. Xaaladahaas marka aysan jirin fursad aan ugu hambalyayno halyeeyga shaqsiyan, aayadaha gaaban ayaa kaa caawin kara inaad ka gudubto masaafada oo adigoo isticmaalaya SMS ama codka boostada. Hambalyo ku saabsan Guul 9-kii Maajo ee aayadda - sidoo kale waa rooti cajiib leh miiska xafladda.
Awowgayaga, guud ahaan guud ahaaneed, Waxaad u dagaalamaysay guul iyo xorriyad. Dagaalku wakhti dheer ayuu soo afjaray, marna ha iloobin. Waxaan kugu hambalyeynaynaa Maalinta Guul, Rajo wanaagsan, rajo caafimaad leh, Ku noolow farxad na inoogu jirta boqol sano, Si aan waligeed, meel kasta, cidna ogaanin dhib!
Waxaan ku dhasheen markii wax waliba la soo dhaafay, guusheenu ma ahan mid tobaneeyo sano ah, laakiin sida nagu dhow waa waxa horayba loo soo dhaafay. Ilaahay wuu idin siinayaa, askari, sanado badan! Sannad kasta nafta way xanuunsantaa, sobs, Marka xasuusta naga siiso erayada. Ruuxa fasaxu wuxuu ku jiraa hawada, iyo indhaha murugada ilbaxnimo. Waad ku mahadsan tahay in aynaan ogeyn dagaalka, inaanan maqlin dhawaaqa sanadaha xun xun, inaad naftaada naga siisay! Ilaahay wuu idin siinayaa, askari, sanado badan! Ha illoobaan wax walba oo ku saabsan noloshaada, Laylisow xusuusnow magacyadaada. Oo ha dagaallamayaan, oo dunidana waa laga dhawaajiyaa, oo maalintaas oo ah wakhtigii shimbirruhu jawaabtii jinniyadana ku jiri jireen oo kale. Haa, waa fasax timaha timahaaga, waxaad la kulantay dhibaatooyin badan. Dhulka dhulka ku shub, Waayo, isagu wuxuu idin siiyey caawimaad iyo liibaan. Waayeel, waxaad aragtay wax badan. Ku noolow, ha ka murugoonin taariikhda. Anigu waan ku faanayaa adiga: Madadaada ayaa gubanaya ololka nafta!
Wuxuu ka badbaaday dagaalka iyo dhibaatooyinka, wuxuu qaatay lacag dhan iyo waayo-aragnimo, Aabaha jecel, Maalinta Weyn ee Weyn! Adigu waad u adag tahay sida birta. Ilaalinta dalkiisa hooyo, Waxay shaqaysay sanado badan, iyo tan aan ku jeclahay, awoowe ugu fiican dunida! Adiga oo aan, sidee ku noolaan lahaa? Hambalyo, aabihii qaaliga ah, Nabadgelyo iyo rajooyin wanaagsan, Guulo nololeed cusub !!!
Maalinta Guul, oo leh fasax geesinimo ah, Iyadoo fasaxa maqnaanshaha, Calanka Guulaha ayaa la kiciyaa, Qaadashada bilaashka ah waxaa jira waddamo! Waxaan idiin hambalyeeynayaa maanta, Noloshu hadda waa quruxsan tahay, Ciidamadii oo dhan way u sujuudaan, Walaalayaalkeenna ayaa u mahadnaqa, Maanta hadal ha ixtiraamo, ha ka baqin inaad naga badbaadiso, Waan aamusnaan doonnaa waqti aan shaki ku jirin!
Maalinta Guusha waa fasax dalka oo idil. Qaybta naxaasiga ah waxay cayaaraan marches. Maalinta Guulku waa fasax timo cagaar ah, awoowo waaweyn, awoowe iyo kuwa yaryar. Xitaa kuwa aan arkin dagaalkii - Laakiin garabkiisa waxaa taabtay qof kasta, - Hambalyo Maalinta Guulaha! Maalintani waxay muhiim u tahay dhammaan dalka Ruushka.
Gabayo badan oo ku saabsan Maalinta Guusha halkan
Hambalyo qurux badan May 9: sawirro iyo sawirro
Maalinta Guusha waxay calaamad u tahay isku-xidhka taariikhda iyo taariikhda, iyo waxay bixisaa sababo badan oo muujinaya dareenka dhabta ah, oo lagu muujin karo qaab sawir, sawir, sawiro. Hawlgallada noocan oo kale ah ayaa si khaas ah u khuseeya marka fasaxu u hambalyeeyo oo aanay cidina u dirin, laakiin waa asxaab. Sawirada iyo sawirada muuqaalka iyo xasuusta - hambalyo by Maajo 9 - mararka qaar ka badan codkoodu ka badan kumanaan eray, inkastoo, sida caadiga ah, waxay ku jiraan qayb qoraal gaaban. Waxaa lagu samayn karaa gacmahaaga.
Kaarka boostada ee 9-kii Maajo gacmahaaga
Sawirada iyo sawirada laga bilaabo May 9
Dabcan, askartu waa inay dareemaan qadarin iyo fiiro gaar ah oo keliya hal mar sannadkii, aqbalaya hambalyo ku saabsan guusha May 9-keeda. Hase yeeshee, Maalinta Dhibbanaha waxay u baahan tahay hab gaar ah, waxaana rajeyneynaa in tusaalayaasha aan hambalyo u laheyn aayadda iyo qadarin ay kaa caawin doonaan inaad ku muujiso qaabka ugu quruxda badan oo si daacad ah u xushmeynaya darajada iyo feylka, saraakiisha, shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalihii hore ee Waddanka Waddaniga ah oo dhan inay u qalmaan.
Carnations from waraaq sax ah fasax Maajo 9: fasallo majiraan leh sawir iyo video
Ciidanka millatariga ee fasaxa Maajo 9 ee loogu talagalay carruurta dugsiga ee farsamooyin kala duwan
Calaacal aan wanaagsanayn - calaamad u ah May 9, waxyaabo xiiso iyo fudud oo laga sameeyay warqad
Boorsooyinka quruxda badan leh 9-kii Maajo iyaga oo gacmahooda iska leh: saddex-dhinac, oo ah farsamooyinka boodboodka iyo kaydka
Farshaxanka asalka ah ee carruurta ee Maajo 9 (loogu talagalay xanaanada iyo dugsiga). Fasalada Masterka leh sawir iyo muuqaal
Gabayo qurux badan oo dhaqdhaqaaq ah May 9-ka Maalinta Guusha
Xeerarka Anshaxa ee taariikhda dhalinyarada leh
Sida loo sameeyo hookah guriga?
Guryaha daaweynta ee abuurka iyo lowska
Sidee loo ilaaliyaa aragtidaada markaad ka shaqeyneyso kombiyuutarka?
Cake Easter leh sacfraan
Karootada, fitamiinnada, qiimaha nafaqada
Gogosha jiilaalka macnaheedu waa timo
Dharka Xilliga Xilliga Xilliga Xagaaga
Jinsiga halkii uu jiri lahaa jirdhis: hab fiican oo aad u jilicsan
Cake "Maalin iyo Habeen"
Merogues xagaaga ee berry
Paraffinotherapy ee hargabka guriga
Dabin ee Waxbarashada: Shanaad Hababka Xannibmay
Naxariista nin, waad ka xumaan kartaa
Mastopexy ee naaska (naas-nuujinta)